China Steel Platform orinasa sy mpanamboatra |Ampahafantaro
1. Free Stand Mezzanine dia misy andry mitsangana, andry lehibe, andry faharoa, tohatra, tohatra, tohatra, zipo, varavarana, ary kojakoja hafa azo atao toy ny chute, lift, sns.
2. Free Stand Mezzanine dia mora tafangona.Azo amboarina ho fitahirizana entana, famokarana, na birao.Ny tombony lehibe dia ny famoronana toerana vaovao haingana sy mahomby, ary ny vidiny dia ambany lavitra noho ny fanorenana vaovao.
Karazana racking: Free Stand Mezzanine
Habe: namboarina Loading: 300-1000kg perm2
dity No pitch Toerana niaviany Nanjing, Sina
Fampiharana: ampiasaina betsaka amin'ny trano fanatobiana entana avo, entana kely, fanangonana manual ary fitehirizana avo lenta, tahakakojakoja fiara, E-varotra ary indostria hafa.
① Famolavolana malefaka
Ny mezzanine multi-tier dia azo amboarina hifanaraka amin'ny toetry ny trano fanatobiana entana ankehitriny, toy ny fitaovana efa misy, tsanganana trano, vavahadin'ny trano fanatobiana entana, ary sakana hafa.
② Haavo ambony indrindra
Ny Free Stand Mezzanine dia azo amboarina amin'ny rihana roa na mihoatra, mahatonga ny fitahirizana ho avo roa heny, telo na mihoatra, amin'ny fampiasana toerana avo amin'ny trano fanatobiana entana, tsy mila gorodona mezzanine misaraka.
Namboarina ho rafitra modular tanteraka, Free Stand Mezzanine dia azo apetraka haingana tsy misy lasantsy eo amin'ny toerana, ary mora ovaina na mifindra raha misy fiovana amin'ny toetry ny trano fanatobiana entana na fitehirizana.
Misy safidy karazana gorodona mifanaraka amin'ny fepetra samihafa.
④ Mahazatra tsara
Free Stand Mezzanine dia afaka mifanandrify tsara amin'ny karazana racking hafa, izany dia midika fa azo atao ny mametraka racking hafa amin'ny gorodona mezzanine, toy ny talantalana maivana, talantalana antonony, na mezzanine multitier aza, mba hamoronana fomba fitahirizana bebe kokoa.
⑤ lafo vidy
Raha ampitahaina amin'ny fifindrana amin'ny toerana vaovao, na fanitarana ny trano ankehitriny, Free Stand Mezzanine dia manohana ny fananganana gorodona sy talantalana ho iray, izay mitsitsy be ny vidiny, ny fotoana ary ny mpiasa.
teo aloha: Talantalana tsy misy bolt
Manaraka: Longspan Shelving
Drive amin'ny Racking, Conveyor, Baby Shuttle, Shuttle amin'ny lalana efatra, Asrs Storage, Carton Live,